I-1993 iMfazwe yaseMogadishu, eSomalia
Ngo-Oktobha 3, 1993, iseyunithi ekhethekileyo yokusebenza ye-US Army Ranger kunye ne-Delta Force ibambelela kwiziko laseMogadishu, eSomalia ukuba idibanise iinkokeli ezintathu zokuvukela. Iinjongo zacatshangelwa ukuba zichanekileyo, kodwa xa kuthe kwadutshulwa iinqwelo-moya ze-US Blackhawk, i-mission yathatha umonakalo omkhulu kakhulu. Ngethuba ilanga libekwe phezu kweSomalia ngosuku olulandelayo, inani eli-18 labemi baseMerika bebulewe kwathi omnye u-73 walimala.
Umqhubi we-helicopter wase-US uMichael Durant wayebanjwe entolongweni, kwaye amakhulu amakhulu aseSomalia afela kwizinto ezaza kwaziwa ngokuba yiMfazwe yaseMogadishu.
Ngelixa iinkcukacha ezininzi zokulwa zihlala zilahlekile kwi-fog okanye imfazwe, imbali emfutshane yoko kutheni amabutho ase-US elwa eSomalia kwindawo yokuqala ayinokunceda ukucacisa ukuchasana okuye kwavela.
Imvelaphi: Imfazwe yaseSomalia
Ngo-1960, iSomalia - ngoku i- Arabhu ebuthathaka kakhulu malunga nabantu abayizigidi ezili-10.6 ezikulo phondo lwaseMpuma-Afrika. Ngowe-1969, emva kweminyaka engama-9 yolawulo lwentando yesininzi, urhulumente waseSomali okhethiweyo ngokuzikhethela wagqitywa emkhosini wezempi owawubizwa ngokuba ngumkhosi wezwe owabizwa ngokuthi ngu-Muhammad Siad Barre. Ngomzamo ongaphumelekanga wokuseka oko akubiza ngokuthi " intlalo yesayensi ," uBarre wabeka ubuninzi bezoqoqosho eSomalia ngaphantsi kolawulo lukaRhulumente oluxhaswa ngumlawuli wezempi wegazi.
Ngaphandle kokuphumelela phantsi kolawulo lukaBarre, abantu baseSomalia bawa buhlwempu. Inkxwaleko, isomiso esinomonakalo, kunye nemfazwe eyimali eyiminyaka elishumi kunye neTopiya engummelwane yenza ukuba ilizwe lithembeke.
Ngo-1991, iBarre yachithwa ngamaqela aphikisana neentlanga ezaziphikisanayo ukuze zilawulwe kwelizwe kwiMfazwe yaseSomalia.
Njengoko ukulwa kwasuka edolophini ukuya edolophini, isixeko-ntlanzi saseMomali saseMogadishu esasihluphekile saba, njengoko kuboniswe ngumbhali uMark Bowden kwincwadi yakhe ethi "Black Hawk Down" ukuba ibe "likhulu lehlabathi lezinto- esihogweni. "
Ekupheleni kuka-1991, ukulwa eMogadishu kuphela kwaphumela ekufeni okanye ukulimala kwabantu abangaphezu kwe-20,000. Iimfazwe phakathi kweentsapho zatshatyalalise ezolimo zaseSomalia, zishiya ininzi yelizwe ngendlala.
Imizamo yokunceda abantu ngokubanzi eyenziwa yimihlaba yamazwe ngamazwe yatshatyalaliswa ngamagosa asemagunyeni asekuhlaleni aqikelele u-80% wokutya okwenzelwe abantu baseSomalia. Naphezu kwemizamo yokunceda, abantu abangama-300 000 baseSomalia babulawa yindlala ngo-1991 nangama-1992.
Ukulandela ukutshatyalaliswa kwesikhashana phakathi kweenkwenkwezi zokulwa ngoJulayi 1992, iZizwe eziManyeneyo zathumela abantu abangama-50 abajonge eSomalia ukuba balondoloze imizamo yokunceda.
Ukubandakanywa kwe-US eSomalia kuyaqalisa kwaye kukhula
Ukubandakanyeka kwempi yase-US eSomalia kwaqala ngo-Agasti 1992, xa uMongameli uGeorge HW Bush wathumela amabutho angama-400 kunye neenqwelo ezilishumi ze-C-130 zokuthutha kuloo mmandla ukuxhasa i-UN inkxaso yelizwe lonke. Ukuhamba ngeMombasa, eKenya, i-C-130 ihamba ngee-toni ezingama-48 000 zokutya kunye neenkonzo zonyango kwi-mission ngokusemthethweni ebizwa ngokuba yi-Operation Provide Relief.
Imizamo yoSebenzi Yokunikezela Ngempumelelo ayiphumelelanga ukukhupha umkhuhlane wokunyamezeleka eSomalia njengokuba inani labafileyo lalingama-500,000, kunye nezinye izigidi ezili-1.5 ezifudukisiwe.
NgoDisemba 1992, i-US yaqalisa uMsebenzi wokubuyisela iThemba, umbutho omkhulu wemikhosi yamagosa ekumanyeleni ukukhusela kangcono inzame yomntu. I-US inikezela ngokubanzi umyalelo wokusebenza, izixhobo ze-US Marine Corps zikhusele ngokukhawuleza ulawulo lwesigidi sesithathu saseMogadishu kubandakanywa iselwandle kunye ne-moya.
Emva kwebutho elivukelekileyo eliholwa ngumkhosi waseSomalia kunye nenkokheli yezindlu u-Mohamed Farrah U-Aidid wabetha iqela lokulondoloza uxolo ePakistan ngoJuni 1993, ummeli we-UN eSomalia wayala ukuba u-Aidid abanjwe. I-Marines yase-US yabelwa umsebenzi wokubamba i-Aidid kunye nabaphathi bayo beentloko, ezikhokelela kwi-Battle of Mogadishu.
Imfazwe yaseMogadishu: I-Mission is Gone Bad
Ngo-Oktobha 3, 1993, i-Task Force Ranger, eyaqulunqwa yi-elite US Army, i-Air Force, kunye nemikhosi ekhethekileyo yemisebenzi ye-Navy, yaqalisa umkhankaso wokubamba i-warrord uFaro Far Aidid kunye neenkokheli ezimbini eziphezulu zakwaHabr Gidr. I-Task Force Ranger yayinamadoda angama-160, iinqwelo-moya ezingama-19 kunye neenqwelo ezi-12. Ngomsebenzi obekucetywayo ukuba ungathathi ngaphezulu kweyure enye, i-Task Force Ranger yayiza kuhamba ukusuka kwinkampu yayo emaphethelweni omzi ukuya kwisakhiwo esitshisiweyo kufuphi negosa laseMogadishu apho u-Aidid kunye nabathetheli bakhe bekholelwa ukuba babedibana.
Ngethuba lo msebenzi wawuphumelele okokuqala, loo mqathango ngokukhawuleza yaqhuma ngaphandle kokulawula njengoko i-Task Force Range yazama ukubuyela kwikomkhulu. Ngemizuzu emibini, umsebenzi we "hora elilodwa" wawuza kuba yinkqubo yokuhlangula yobusuku obuba yi-Battle of Mogadishu.
Amaminithi emva kokuba i-Task Force Ranger iqalile ukushiya indawo, bahlaselwa ngabantu baseSomalia nabasemagunyeni abaxhobileyo. Ii-helicopter ezimbini ze-US Black Hawk zadutshulwa ngama-rocket-propelled-grenades (RPGs) kunye nezinye ezintathu zonakaliswe kakubi.
Phakathi kwabasebenzi be-Blackhawk yokuqala batshayela phantsi, abaqhubi kunye nabaqhubi baqhutywe, kunye namasosha amahlanu emkhombeni, balimala kwingozi, kubandakanye nomnye owafa ngamanxeba. Ngelixa abanye abasindileyo baphumelele, abanye bahlala behlonywe ngumlilo. Ekulweni ukukhusela abasindileyo, amasosha amabini aseDelta, uSgt. UGary Gordon kunye noSgt. Iqela lokuQala likaRandall Shughart, babulawa ngumpu otshabayo kwaye baphinde banikezelwa iMedal of Honor ngo-1994.
Njengoko kwajikeleza indawo yokuphazamiseka ekuboneleleni ngomlilo, owesibini waseBlackhawk wadutshulwa. Ngoxa abantu abathathu babulawa, umqhubi uMichael Durant, nangona ephukile emlenzeni nasemlenzeni, wayephila, kuphela ukuba athathwe intolongo ngamajoni aseSomalia. Idabi yasezidolophini ukuhlangula iDurant kunye nabanye abasindileyo beza kuqhubeka ngobusuku ka-Oktobha 3 kuze kube semini ka-Oktobha 4.
Nangona wayephathwa kakubi ngabathumbi bakhe, u-Durant wakhululwa emva kweentsuku ezili-11 emva kokuxoxisana okukhokelwa ngudiplomat wase-US uRobert Oakley.
Ngabantu abangama-18 baseMelika abalahlekelwa ubomi babo ngexesha lokulwa kweyure ezili-15, inani elingaziwa lamasosha aseSomalia nabasetyhini babulawa okanye balimala. Uqikelelo lwabahlali baseSomalia babulala ububanzi ukusuka kumawaka ambalwa ukuya ngaphezu kwewaka, kunye nabanye aba-3 000 ukuya ku-4 000 balimala. I-Red Cross iqikelele ukuba abantu abangama-200 baseSomalia - abanye babo babika ukuba bahlasela amaMerika-babulawa ekulweni.
Somalia Kususela kwiMfazwe yaseMogadishu
Kwiintsuku emva kokulwa, uMongameli uBill Clinton wayala ukurhoxiswa kwayo yonke imikhosi yase-US eSomalia kwisithuba seenyanga ezintandathu. Ngo-1995, umsebenzi wokunceda abantu base-Somalia eSomalia waphela ngokungafezeki. Nangona i-warriord yaseSomalia i-Aididi yasinda empini kwaye yayinandipha udumo lwengingqi "yokulwa" namaMerika, kwathiwa wafa ngesifo senhliziyo emva kokuhlinzwa ngenxa yecala lokubhunqa ngaphantsi kweminyaka emithathu kamva.
Namhlanje, iSomalia ihlala enye yezona zihlwempu kwaye ziyingozi kwihlabathi. Ngokwe-Human Rights Watch yamazwe ngamazwe, amajoni aseSomalia aqhubeka nokunyamezela imeko yokuxhatshazwa kwabantu kunye nokuxhaphazwa ngokwenyama ngabaholi beentlanga.
Ngaphandle kokufakwa koburhulumente obusisezwe ngamazwe ngo-2012, isizwe ngoku sisongelwa ngu-al-Shabab, iqela eliyi-terror elibandakanyeka ne- Al-Qaeda .
I-Human Rights Watch ibika ukuba ngo-2016, i-al-Shabab yenza ukubulawa okujoliswe kuzo, ukubethelwa kweentloko kunye nokubulawa, ngokukodwa kwabo batyholwa ngokuhlola nokusebenzisana noorhulumente. Iqela elixhobileyo liyaqhubeka nokulawula ubulungisa, lugxotha abantwana ngokukhawuleza, kwaye lukhusela amalungelo asemgangathweni kwiindawo eziphantsi kolawulo lwalo, "kuchaza umbutho.
Ngo-Oktobha 14, ngo-2017, amabhomu amabhoglo eMogadishu abulala abantu abangaphezu kwama-350. Nangona kungekho nkqantosi ebangela uxanduva lokuqhubhisa ibhomu, urhulumente wase-Somali ogunyaziwe yi-UN uthi u-al-Shabab. Kwiiveki ezimbini kamva, ngo-Oktobha 28, ngo-2017, ukuvinjelwa kokufa kwehotele yaseMogadishu kwabulala abantu abangama-23. U-Al-Shabab uthe ukuhlaselwa kwakuyingxenye yokugxeka kwakhe eSomalia.
I-Boxer Rebellion: I-China Inxamnye nama-Imperialism
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseMegido
Imfazwe yasePeleliu - iMfazwe Yehlabathi II
Eyesithathu iMfazwe yaseMacedonia: iMfazwe yasePydna
Ukuvukela kwePontiac: Ingqwalasela
Iimfazwe zePunic: iMfazwe yaseZama
IPoland Genealogy yolwazi kwi-Intanethi
Izikhokelo Zokubonga Ubuncwane Bokubhukuda Iifomthi Yamanzi
Itheyibhile yoTyunjwa kwi-verb yesiNgesi Capre
Iincwadi eziPhambili zePainting Ideas kunye nokuPhefumlelwa
USamuweli - Ekugqibeleni kwabagwebi